Tuesday March, 26 2019 - 16:27:15
Wednesday March 21, 2018 - 11:41:13 in by salman abdi
Dawladda Jabuuti inta badan marka ay wararka caalamka soo gasho ama lagu soo hadal qaado waa war xidhiidh la leh dawladaha waaweyn ee saldhigyada millatari ka samaystay xeebeheeda, sida faransiiska, Maraykanka, Shiinaha, Talyaaniga iyo Jabbaan oo dhammaantood ciidamo ka joogaan dalkan yare ee geeska Afrika ku yaalla. Laakiin dawladda Jabuuti waxa jirta quwad kale oo uga muhiimsan kuwaasoo dhan waana dalka Itoobiya.
Way adagtahay in qofna ka ilduufo sida dhaqaalaha Jabuuti ugu tiirsanyahay dawladda ay jaarka yihiin ee Itoobiya. Jabuuti ma laha biyo saafiya, sidaa daraaddeed biyaha waxay ka soo qaadataa Itoobiya, sidoo kale badi korontada ay shidataa waxay uga timaaddaa Itoobiya.
Jabuuti ma jiro haba yaraate majiro wax ka bixi karaa, taasoo iyaduna keentay in khudaarta darayga ah iyo midhahaba ay ka keensato Itoobiya, waxaanay maalin kasta ka soo gudbaan xadka labada dal.
Dhaqaale ahaan hantida ugu badan ee aya Jabuuti haysataa waa dakadeheeda, dakadaha laftooduna waxay mar walba u baahanyihiin xidhiidh wanaagsan oo Daladdoodu si joogtoah ula lahaato Itoobiya oo aan bad lahayn una baahan meel ay wax kala soo degto. Marka la eego faraqa tirada dadka ee u dhexeeya Itoobiya oo ah in kabadan 100 Milyan iyo Jabuuti oo ka yar 1 milyan, dekedda Jabuuti waxay mar walba ahayd meel ay Itoobiya ku ganacsato in ka badan inta Jabuuti ka faa’iddo. Haddii ganacsiga ay Jabuuti la leedahay Itoobiya meesha ka baxo, ma jiri doonaan Maraakiib danbe oo Kuyuu u soo gaali doonta Dekedaha Jabuuti.
Waxa haddaba jira laba arrimood oo dhaawici kara xidhiidhka ganacsi ee Itoobiya iyo Jabuuti. Tan hore waa xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Itoobiy. Bishii inna dhaaftay ee labaad waxa si lama filaan ah isku casilay raysalwasaarihii Itoobiya Hayle Mariam desalegn, isla markiiba xisbiga talada haya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah. Oromada oo ah qawmiyadda ugu badan itoobiya ayaa in muddo ah ka wadday dalkaasi mudaharaaddo ay kaga soo hor jeedaan dawladda. Arrimaha noocan oo kale ahi war fiican uma aha Dawladd Jabuuti. Qalaanqal kasta oo ku dhaca dhaqaalaha Itoobiya waxa uu si toos ah saamayn taban ugu yeelanayaa Jabuuti halka haddii qalaanqal siyaasadeed ka dhacana ay keenayso qaxoonti badan oo ku soo burqada dhanka Jabuuti, kaaso oo aanay Jabuutina awood dhaqaale iyo mid dhuleed toona u hayn.
Arrinta labaad ee dawladda Jabuuti isha ku haysaa waa qaybta 19%ka ah ee Itoobiya laga siiyay dakadda Berbera ee Somaliland. Berbera waxay isku waddaa inay tartan la gasho Jabuuti waxaany u diyaargaroobaysaa inay soo maraan xamuul badan oo Itoobiya leedahay. Sidoo kale Somaliland waxay dhisaysaa waddo ganacsiyeed isku xidha Berbea iyo Addis Ababa.
Taariikh ahaan Jabuuti, faa’idooyinka istaraatijiyadeed ee ay haysato, waxa ka mid ah deganaansheheeda dhanka ammaanka iyada oo ay ku wareegsanyihiin dawlado aan xasilloonayn sida Eratariya, Soomaaliya iyo Yemen. Jabuuti waxay tusaale u tahay meel khatarteedu yartahay isla markaana la maalgashan karo, laakiin hadda waxay u muuqataa in godkeedii biyo ugu galeen. Waayo waxa dhanka amaanka tartan kula jirta Somaliland.
Jamhuuriyaddan iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday waxay isku maamushaa si gabi ahaanba ka madax bannaan Soomaaliya. Intaaa marka marka laga tago Somaliland waxay ku guulaysatay dimuqraadiyad nabadgalyo ku dhisan iyada oo si nabadgalyo ah awoodda loola kala wareegay dhawr jeer, marka la barbardhigo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo in ka badan 19 sano kaligii ka talinayay jabuuti.
Sidaa daraaddeed Somaliland waxay noqotay meel soo jiidanaysa maalgashi, xeebta geeska Afrika. Itoobiyana inay arrintaa aqoonsantahay waxa caddayn u ah sida ay qaybta uga heshay maalgashiga dekedda Berbera.
" aad baan ugu faraxsanahay wada shaqaynta na dhexmaraysa Itoobiya. Itoobiya dadkeedu waxa uu gaadhayaa 110 Milyan. Dekeddaa Dooraale iyo Berbera waxay kor u qaadi doonaan dhaqaalaha gobolka oo dhan, mustaqalkana waa loo baahan doonaa” sidaa waxa yidhi Madaxa shirkada Dp world Sultan Ahmed Bin Sulayem.
Haddii wax waliba sida la rajaynayo u socdaan, Sulayem hadalkiisaasi waa mid sax ah. Dekedaha Dooraale iyo Berberiba waxay noqonayaan qaar uu mashquuliyo dhaqaalaha Itoobiya ee sida xad dhaafka ah u koraya. Laakiin haddii degganaansho la’aantu ay itoobiya kasii socoto, ma jiro wax dammaanad qaadaya in wax waliba sidaa la doonayo u soconayaan, Jabuutina waxay u darsan doontaa khadaartii Biyihii iyo dabkii uga imman jiray Itoobiya.
Waxa soo Tarjumay C/raxmaan C/laahi Warsame
Sanaag:Ciidanka Qaranka Somaliland Ee Gobolka Sanaag Oo Soo Dhaweeyey Saraakil Ka Soo Goostay Jabhada Kornayl Caarre
25/03/2019 - 18:24:09
Hargaysa:Dalada Ururada Aan Dawliga Ahyn Ee Sonsaf Oo Oo Komishinka Doorashoyinka Somaliland Ugu Baaqday Inay Si Dhakhso Ah Isku Casilaan
25/03/2019 - 17:57:36
Hargeisa:-Saraakil Ka Tirsan Ciidanka Booliska Somaliland Oo Tababar Looga Furay Jaamacada Hargeisa.
Hargeisa:-Shacabka Caasimada Hargeysa Oo Ka Dareen Celiyay Khudbad Sanadeedkii Madaxwaynaha Somaliland Uu Ka Jeediyay Labada Gole.
Hargeisa:-Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Somaliland oo Dastuur Jabin sameeyay.
25/03/2019 - 16:45:35
Hargeisa:-Golaha Degaanka Burco Oo Kulan La Qaatay Golaha Wakiilada Somaliland Iyo Arimaha Laga Wada hadlay.
Hargeisa:-Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Somaliland Oo Shaaciyey Masuuliyiinta Musuqmaasuqa Loo Haysto.
24/03/2019 - 18:33:34
Hargeisa:-Sharciga Somaliland Muxuu ka Qabaa Masuulka Musuq-maasuq Lagu Edeeyo.
24/03/2019 - 18:18:37